Global Voices teny Malagasy · 4 Novambra 2018
Tantara tamin'ny 04 Novambra 2018
Navoaka ireo Rakipeo Tsy Nasiam-panovàna
Ireto ambany ireto ny rakipeo tsy nasiam-panovàna tanatin'ireo fivorian'ny Global Voices rehetra. Marihina fa tsy ny rehetra no niteny tsara tao amin'ny famoahampeo, noho izany dia hisy ireo olona heno kokoa nóho ny hafa.
Afrika Mainty04 Novambra 2018
Hita anatin'ny iray amin'ireo toeram-piantsenana goavana indrindra ao Maputo ny tranombarotra "Hitler", izay toa nanomboka nisokatra tany amin'ny voalohandohan'ny volana Oktobra tany.
Amerika Latina04 Novambra 2018
Tamin'ny taona 1975 no nanomboka nanatanteraka ny nofinofiny i José Antonio Abreu, dia ny famoronana orkestra iray tao Venezoelà. Mpianatra valo hafa no niaraka taminy nanomboka izany tao amin'ny Sekoly Fianarana Mozika tranainy José Angel Lamas.
Ny “Freedom to Connect”
Hiresaka momba ny Global Voices aho anatin'ny resaka amin'ity tolakandro ity, izay mifantoka amin'ny fikendrena hahazo aterineto mora sy amin'ny sarany mirary ho an'ny olona rehetra maneran-tany, mba hamoronana media iraisam-pirenena demôkratika kokoa sy adihevitra ahitàna lafiny maro kokoa manerana izao tontolo izao.